युगसम्बाद साप्ताहिक - अबको अभियान– अभिभावकलाई रोजगारी बालबालिकालाई शिक्षा- गीता श्रेष्ठ
Saturday, 05.30.2020, 05:29pm (GMT+5.5) Home Contact
अबको अभियान– अभिभावकलाई रोजगारी बालबालिकालाई शिक्षा- गीता श्रेष्ठ
Tuesday, 09.25.2018, 12:14pm (GMT+5.5)
शिक्षा र समृद्धि एकापसमा सम्बन्धित छन् । शिक्षित समाज गरीब हुँदैन, समृद्ध समाज चेतनाहीन हुँदैन । त्यसैले त शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो । उतिबेला काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख शहरका चोकहरुमा एउटा वाणी टाँगिएको हुन्थ्यो– “शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही पनि बालबालिका वञ्चित हुन नपरोस् !” यो वाणीले शिक्षाले मानिसको जीवनमा कति महत्व राख्दछ ? शिक्षा अनिवार्य शर्त हो व्यक्ति र राष्ट्रको जीवनका लागि भन्ने तथ्य उजागर गर्दथ्यो । अब प्रश्न उठ्छ– मुलुकको भविष्य निर्माणका लागि तयार हुने जनशक्तिको महत्व दर्शाउन र शिक्षाप्रति सबैमा जागरण ल्याउन शिक्षालाई किन यति विकृत पारिएको ? किन नीति बन्ने, बजेट सक्ने नतिजा नदिने भयो शिक्षा ?
जनतालाई अधिकार दिन कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन । कानुनले लेखेका कुराहरुलाई व्यवहारमा उतार्न र अभ्यासमा ल्याउन जनतालाई सोही अनुसार सक्षम पनि बनाउनुपर्छ । जनतालाई सक्षम बनाउन शिक्षा आवश्यक छ । शिक्षाको यही महत्व बुझेर संविधानमै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियो । त्यही अनुसार विधेयक संसदबाट पारित भयो । विधेयकमा छोराछोरी विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाही गर्नेसम्मको प्रावधान राखियो । यो राम्रो पक्ष हो । पूर्ण शिक्षित समाज नै सभ्य हुन्छ र त्यही समाज उन्नत हुन्छ । नेपालको अहिलेको अवस्था आउनुमा उचित, सुलभ र समयसापेक्ष शिक्षाको अभाव हो । यसो भन्दैमा र कानुनमा लेख्दैमा समाधान हुन्छ त ? पक्कै हुँदैन । “हरेक नागरिकको शिक्षा आर्जन गर्ने नैसर्गिक अधिकार राज्यले पूरा गर्नुपर्दछ” भनिए पनि हाम्रा लाखौं बालबालिका अझै पनि शिक्षाको त्यो उज्यालो र न्यानो घामबाट वञ्चित छन् । यसको मूल कारण गरीबी हो ।
संविधानमा अनिवार्य शिक्षा भनिएको छ । के यति गरेर मात्र पुग्छ ? अभिभावकहरु बालबालिकालाई शिक्षा दिलाउनसक्ने हैसियतमा छन् कि छैनन् भन्ने अहं सवालतिर दृष्टिगोचर गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? जवसम्म परिवारको आर्थिक स्थिति सामान्य गर्जो टार्ने हैसियतको हुँदैन तबसम्म कानुनले अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि सबै बालबालिका विद्यालय जान सक्दैनन् । उनीहरुको बाध्यता नै हो कि बाँच्नकै लागि श्रम गर्नैपर्छ । बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने अभिभावकले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन सक्दैनन्– निःशुल्क नै भए पनि ।
अबको नारा “हरेक अभिभावकलाई रोजगारी– प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा” बन्नुपर्छ । बालबालिका विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने नियम बनाए पनि वा योभन्दा कडा बनाए पनि उनीहरुले हातमुख जोर्न नै नसक्ने अवस्था छ भने अभिभावकले विद्यालय पठाउँदैमा बालबालिकाले शिक्षा ग्रहण गर्न सक्दैनन् । अब घन्किएका नारा र भट्याइएका भाषणलाई कार्यगत रुपमै अघि बढाउने हो भने शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षामा लगानीको अर्थ शिक्षाका लागि बालबालिका विद्यालय पठाउन नसक्ने अभिभावकको आयआर्जनमा समेत गर्नुपर्दछ । यसो गर्नसके मात्र सबै बालबालिका विद्यालय जान्छन्, उनीहरुले शिक्षा आर्जन गर्छन् । होइन– अभियानका समममा मात्रै विद्यार्थी भर्नाको तथ्यांक बटुलेर दातालाई बेचेर रकम मात्र ल्याइरहने मेसो बनाइरहने हो भने नारा घन्काउनुको कुनै अर्थ छैन ।
सबैलाई अनिवार्य शिक्षा र असल शिक्षा दिने हो भने अहिलेको प्रवृत्तिको पूर्णतः अन्त्य हुनु आवश्यक छ । प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिकरणको शिकार भएको छ । उच्च गुणले युक्त भएको शिक्षक, प्राध्यापक वा प्रशासकभन्दा दलीय आबद्धता भएको व्यक्तिको खोजी हुने गरेको छ । यो विद्यालय तहदेखि नै सुरु हुन्छ । विद्यालय संचालक समितिमा कुन दलको पकड रह्यो भन्ने जस्ता गलत अभ्यासले गर्दा पठनपाठन कम राजनीति बढी हुन्छ । अहिले शिक्षाका लागि छुट्याइएको रकममध्ये ८५ प्रतिशत विद्यालयका लागि खर्च हुन्छ । तर, त्यो रकम शिक्षाको गुणस्तर बढाउन कम शिक्षकको तलबभत्ता, मसलन्द आदिमा बढी खर्च हुन्छ । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा विज्ञान, अंग्रेजी, गणित जस्ता विषयको शिक्षक नै उपलब्ध हुन मुस्किल पर्छ । केही निजी विद्यालयहरुले घुस्रदै–लत्रदै ती विषयहरु धानिरहेका छन् ।
अझ उच्च शिक्षामा पनि सरकारी लगानीको ठूलो अंश ओगटेका त्रि.वि.मातहतका आंगिक क्याम्पसहरू सुक्दै गएका छन् भने निजी क्षेत्रका कलेजहरू मौलाउँदै गएका छन् । प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सरकारी लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तो स्थिति छ । अर्कोतिर गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षापछिको सुखद भविष्य निर्माण गर्न भन्दै लाखौं युवा–विद्यार्थीहरु विदेशिएका छन् । अध्ययनका लागि मात्र अर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको छ । गत वर्षमात्रै उच्चशिक्षा प्राप्तिका नाममा ४० अर्ब रकम बाहिरिएको अभिलेख छ । त्यसलाई मात्र रोक्न सक्ने हो भने अध्ययनकै लागि विदेश गएको रकमले यहाँ धेरै काम गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि चाहिन्छ स्पष्ट नीति । स्पष्ट शिक्षा नीति बनाएर त्यसलाई राजनीतिक स्वार्थ नघुसाउने हो भने शिक्षाको उज्यालो घामबाट सबै बालबालिकाले राप र ताप पाउनेछन् ।
हामी सबैले बुझेको कुरा के हो भने– आजका बालबालिकालाई भोलिका लागि राष्ट्रको जिम्मेवार नागरिक बनाउने शिक्षाले नै हो अनि त्यो शिक्षासंगै उसलाई स्वदेशमै अवसर छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु हो । यसका लागि आजको जस्तो युवा पलायनको स्थिति रोक्नैपर्दछ । पढेलेखेकादेखि सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेसम्म सबै विदेश दगुर्छन् । अनि कलिला मस्तिष्कमा पनि त्यही भानपर्छ कि पढे पनि विदेश–नपढे पनि विदेश ? यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । यसका लागि कुरो रोजगारीमै गएर अडिन्छ । यदि अहिलेदेखि नै शिक्षा र रोजगारीलाई साथसाथ लिएर जाने अर्थात् व्यक्तिको योग्यता–क्षमता अनुसार काम दिलाउने हो भने यसले बालबालिकालाई विद्यालय जान उर्दी लगाउनै पर्दैन । सामान्य रुपमा हात–मुख जोर्नसक्ने अवस्था बनाइदिने हो भने हरेक बालबालिकाले विद्यालयको मुख देख्ने मात्र हैन, पढ्न नै पाउने छन् । कानुन निर्माणसंगै यी पक्षलाई ध्यान दिनैपर्छ ।